Ny tombontsoa azo avy amin'ny banky Swiss, ny tsiambaratelo, ny fandaniana ary ny fananganana kaonty
Manangana orinasa orinasa, orinasam-pambolena sy fiantohana, ary banky • Hatramin'ny 1906
Valin'ny valin'ireo mpahay siansa za-draharaha
Mametraha fanontaniana momba ny banky orinasa, orinasa orinasa, fiarovana ary ny lohahevitra mifandraika amin'izany.
Antsoy ny ora 24 Hrs./Dia
Raha sahirana ny mpanolo-tsaina dia miangavy anao indray.
Banky Swiss Efa ela no nifandray tamin'ny banky matihanina, malina ary azo antoka. Zava-dehibe ho an'ny fitsarana noho ny tsy fiandanian'izy ireo sy ny fanarahana ny fitsipiky ny tsiambaratelo momba ny banky. Ny olona matetika dia mitarika antony roa ho an'ny banky Soisa. Voalohany, maro no miezaka miaro ny harena be loatra amin'ny fanadihadiana ampahibemaso. Faharoa, olona maromaro no mivadika any Soisa mba hanamaivana ny enta-mavesatry ny hetra mavesatra. Samy nikaroka ho an'ny Consortium Banky ny vondrona roa ho toy ny safidy manintona.
Ary ireo tolotra ireo dia tsy vaovao vaovao. Ny kaontin'ny banky Swiss no mpitarika ny banky iraisam-pirenena nandritra ny am-polo taona. Izany dia fisaorana noho ny tsy fisian'ny ampahany kely amin'ny korontana ara-politika sy ny ady an-trano manerana izao tontolo izao. Izy ireo dia mpitarika amin'ny fiarovana ara-bola sy ny fahamarinan-toerana nandritra ny taonjato maro. Raha ny marina, izao tontolo izao dia nanatri-maso izany tamin'ny andron'i Louis XIV. Ankoatr'izay dia nitohy ny andro talohan'ny revolisiona frantsay sy tamin'ny alalan'ny ady lehibe roa. Ny fikojakojana ny fananana sy ny kapitalina avy amin'ny hetra tsy miankina na ny governemanta manafintohina dia ny kofehy iombonana. Noho izany, nitodika tany Soisa ny mpandraharaha mpamantatra, mba hanomezana ireo tolotra ireo.
Ny antony nahatonga ny banky Soisa hanangana ity mendri-piderana ity offshore bank Ny lazany dia ity. Ny lazany dia miorina tsara amin'ny hoe manana lalàna sy fitsipika tena iankinan'ny rafitra i Suisse. Ny didy amam-pitsipika dia mamaritra mari-pahaizana manokana ho an'ny bankiny. Ankoatra izany, mahazo tombony amin'ny fiarovana sy ny tsiambaratelo ireo kaonty any ivelany, raha azo atao. Manatsara bebe kokoa io lazany io fa ny banky Soisa dia manolotra tambajotra tsy mendrika. Ankoatr'izany, maneho fahamendrehana tanteraka izy ireo fa ny tontolon'ny banky matanjaka indrindra eran-tany.
Tantaran'ny Banky Swiss
Ny tsiambaratelo Bankin'ny fahamendrehana amin'izao fotoana izao dia afaka manamarina ny fiandohany ao amin'ny Lalàna Banky Swis an'ny 1934. Ny governemantany dia nampihatra ny lalàna tamin'ny ankapobeny noho ny fandrahonana nasionalin'ny Nazia sy ny korontana politika tany Frantsa. Ireo orinasa roa ireo dia nanandrana nanery ny banky Soisa hamoaka ny fampahalalam-baovao mpaninjara amin'ny anaran'ny "soa amin'ny fanjakana."
Namaly tamin'ny Lalàna Bank of 1934 ny Swiss. Io lalàna io dia nanasongadina ny fitsipiky ny kaontin'ny tsiambaratelo. Nomena fototra ara-dalàna koa izy io. Farany dia nomena sazy ara-dalàna avy amin'ireo izay manohintohina ny tsiambaratelon'ny kaontin'ny mpametra-bola. Izany dia miteraka ny zava-misy ankehitriny izay (ary apetrakao fotsiny) dia mihazona ny fitsipika sy fitsipika ho tsy hay hazavaina. Izany hoe, raha manaja ny fametrahana tsiambaratelo ny fametrahana sy ny fifampiraharahana, ary ny mombamomba ny mpametra-bola na ny kaonty. Tsy manaisotra ny tantaran'ny banky ry zareo. Tsy maintsy misy ny fiampangana heloka bevava mialoha ny fandefasan'ny masoivohom-panjakana iray, indrindra fa ny vahiny iray, afaka manindrona an'io fiarovana tsiambaratelo io.
Na dia ny fiampangan'ny hetraketraky ny hetra aza dia mety ho ampy hanesorana ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo ao amin'ny banky Soisa. Ny fiampangana tsotra dia tsy fandikan-dalàna goavana loatra any Soisa, fa tsy mihoatra noho ny fahadisoam-panantenana. Azo antoka fa tsy ampy ny mampandefitra ny fitsipika. Ny fiampangàna dia tokony hanana toetra matotra mba hahafahan'ny banky Soisa iray hihevitra ny hanitsakitsaka ny fitsipika. Izany dia milaza, fa manery mafy ny fanekena ny hetra amin'ny toerana misy anao sy ny zom-pirenena ianao.
Amin'ny ankamaroan'ny tombantombana na fepetra, ny banky Soisa dia mitazona ampahatelon'ny vola rehetra ao anaty offshore accounts. Raha jerena ny isa maromaro ananan'ireo manam-pahefana ivelan'ny toeram-piarovana any ivelany, dia toy izany ny endrika miavaka. Ny banky Soisa dia mitentina $ 2 arivo tapitrisa dolara amerikana ary ny fanambarana amin'ny ankapobeny. Noho izany, ny sosaire dia mbola fitsipi-pitenenana tsy azo avela amin'ny famolavolana tontolon'ny banky maharitra sy azo antoka.
Nomena ny banky Swiss
Ny kaonty "nomerao amin'ny banky" dia tsy misy afa-tsy ny kaonty voatondro amin'ny isa iray. Ny isa maromaro fa tsy ny anaran'ny mpametaveta no mamaritra ny kaonty. Ny banky Soisa no mametraka ny fenitra tsiambaratelo miaraka amin'ny kaonty nomerao. Na izany aza, tokony misy olona manana anarana antsoina mifandraika amin'ny kaonty voamarina. Saingy ny banky no mihazona ny maha-izy azy. Tsy fantatra izany fa ho an'ny mpiasam-panjakana ambony ao amin'ny banky Soisa izay itazonana azy.
Ireo kaonty ireo dia mazava ho azy fa manome fitohizan'ny tsiambaratelo. Mety ho tena ilaina izy ireo, ohatra, amin'ny orinasa iray na orinasa malaza eo an-dalan'ny fananana lehibe. Mety hisy ny fifanakalozan-kevitra izay tokony handratra ny fananana nefa tsy hampandre ny mpifaninana, ny fampahalalam-baovao, na ireo olon-kafa mety ho mpanohitra. Zavatra iray tokony ho hita amin'ny famakiana etsy ambony. Na any amin'ny kaontin'ny banky Soisa aza, ny banky dia tsy afaka manome toky tanteraka ny anarana rehetra; indrindra amin'ny raharaha heloka bevava. Saingy akaiky ny kaonty serba Suisse raha toa ka ny kaonty dia afaka mahazo fahamalinana.
Banky Suisse ankehitriny
Mety hanjary ho faty sy ho faty ny teknolojia miova. Mety misy teknika izay manala ny tanjon'izy ireo na ny fomba fiasa. Tsy dia marina loatra izany amin'ny orinasan'ny banky Soisa. Ny banky Soisa dia nanitsy haingana ho setrin'ny fikorontanan'ny teknolojia tafiditra amin'ny tontolo androany. Noho ny famindrana vola elektronika, ho an'ireo teknolojian'ny famahanan-tsarimihetsika mega-bit, ny banky Soisa dia eo an-dalam-pandrosoana ny fomba fitantanana ny banky maoderina. Amin'ny ankapobeny, dia ireo andro sarobidy sarobidy sarotra sy ny tranga misy any am-pivoriana. Amin'izao fotoana izao izy ireo dia misolo toerana hatrany amin'ny sonia elektronika sy ny fampiasana "filamatra" amin'ny aterineto. Tax fanarahana ny ampahany amin'ny lalao androany. Ny lalàna manohitra ny fanodinana volam-panjakana dia eo an-toerana mba hitazonana ireo tovolahy tsara sy ireo lehilahy ratsy.
Raha ny fanombohan'ny lalàna momba ny fanarahan-dalàna momba ny hetra ho an'ny fananan-tany (FATCA) any Etazonia, ny banky izay te hampita ny vola amerikana dia tsy maintsy manome mangarahara ho an'ny tompon'ny kaonty US. Ny Kongresy Amerikana dia namoaka ny lalàna tamin'ny 18 2010, 26 (6038 USC § 31D) ary nanitatra azy io tamin'ny volana 2012, 26 (1471 USC §§ 1474-2.5). Ny tanjona dia ny hampihatra ny fananganana hetra iraisam-pirenena. Ny fandalinana iray avy any Texas A & M dia namintina fa ny hetsika dia hamorona latsaky ny $ 11 miliara amin'ny fidiram-bola amin'ny taona 8.7. (Izany dia mifanohitra amin'ny tomban'ny fanombohana ny $ 8 amin'ny kongresy amin'ny vanim-potoana mitovy amin'izany.) Ny tatitra iray ao Forbes kosa, dia manondro fa ny kabine hampihatra ny FATCA mandritra ireo taona ireo dia handoa $ XNUMX miliara.
Noho ny vidim-panarahan-dalàna, maro amin'ireo banky Soisa no nanapa-kevitra ny tsy hanaiky ny mpanjifany Amerikana. Na izany aza, misy banky maromaro any Soisa izay manaiky ny mpanjifa Amerikana. Noho izany, mba hanatanterahana izany fandaniana izany, ireo banky manaiky ny Amerikana dia manana fepetra takiana kely ho azy ireo eo amin'ny $ 250,000 ka hatramin'ny $ 1 tapitrisa amerikana.
Ankehitriny, ireo banky Soisa dia miasa koa ho trano fampiasam-bola. Mampiasa ny sasany amin'ireo mpanazatra vola be indrindra izy ireo. Noho izany, misy ny safidy ho an'ny tahirin-tsolika, fatorana, vola iombonana ary metaly sarobidy anaty aterineto. Na koa, afaka manana mpanolotsaina ara-bola voaofana ianao hanara-maso ny portfolio.
Tsara ny manamarika fa ny banky Soisa dia manohy manome tontolo tena izy, vahaolana azo tratrarina amin'ny olana maro atrehan'ny mpandraharaha na ny vehivavy mahomby amin'izao fotoana izao; indrindra raha ny mikasika ny fiarovana ny volany. Na fiarovana amin'ny fanitsakitsahana tsy ara-dalàna, ny korontana ara-politika, ny fisalasalana ara-toekarena, na ny vadin'ny vadinao fahiny, ny kaonty banky Soisa angamba no vahaolana notadiavinao.
<Ho an'ny toko 11
Ho an'ny fizarana bonus>
CA 91355, Etazonia
Fankatoavana feno fahafaham-po
Fanoloran-tena mahafinaritra ny mpanjifantsika, ny fanoratana ara-dalàna ny fisoratana anarana, ny fanompoana an-kalalahana ho an'ireo zavatra ao anatin'ny fifehezantsika, ary ny fanompoana ny tombontsoantsika manokana amin'ny mpanjifa sarobidy.